Third 31 Firefox
mubvunzo Third 31 Firefox
2 makore 2 ago #449 by Dariussssss
Munhu kuziva kwokuwana ichi zvinoshamisa shiri nokuda FSX?
Ndinoziva pane imwe pano asi FS2004 chete.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: GODFREYE
2 makore 2 ago #455 by Gh0stRider203
First kure, kuti kusina third 31 elnaz kuti shiri vemungano.
Chechipiri, bhuku Great uye firimu!
2 makore 2 ago #456 by Dariussssss
Teu firimu yakagomara ... akafanana chaizvo mikukutu. Tariro bhuku iri nani.
Ndakanga kuti -31, asi ndakanga ndichitsvaka kuwana uyu, asi nokuda FSX.
2 makore 2 ago #458 by Gh0stRider203
thinkinrussian.blogspot.com/p/download-flightsim-model.html edza izvozvo
2 makore 2 ago #459 by Dariussssss
Check kuti nzvimbo kunze. Mumwe yairwara muropa kuti kufirimu murume ... elnaz
8 mwedzi 3 mazuva apfuura #1210 by FlankerAtRicoo
Ndakaona shiri yacho iri:
Time chokusika peji: 0.935 mumasekonzi